UHarry Potter kanye noHhafu weGazi Lenkosi iyinoveli emayela
ⓘ UHarry Potter kanye noHhafu weGazi Lenkosi iyinoveli emayelana nokuqagela ebhalwe ngowesifazane waseBrithani uJoanne Rowling, olandelayo wokugcina ochungechunge ..
ⓘ UHarry Potter kanye noHhafu weGazi Lenkosi
UHarry Potter kanye noHhafu weGazi Lenkosi iyinoveli emayelana nokuqagela ebhalwe ngowesifazane waseBrithani uJoanne Rowling, olandelayo wokugcina ochungechungeni lweHarry Potter lwezingane. Le noveli ibheka izisulu zabalingiswa abaningi futhi ifaka impi enkulu nenkosi emnyama.
Incwadi yashicilelwa ngonyaka ka-2005 futhi yaphula amarekhodi okuthengisa. Le ncwadi ibigcwele ubumnyama iqhathaniswa neyokugcina futhi yathatha uhambo lwabalingiswa abaphambili. Kwakucatshangwa kahle. Kwenziwa ifilimu ngo-2009.
Wikipedia: UHarry Potter kanye noHhafu weGazi Lenkosi